Puntland oo xukuno ku ridday dagaalameyaal ka tirsan Al-Shabaab
Maleeyshiyaadkan ayaa gacanta lagu soo dhigay ka gedaal markii ay weerar kusoo qaadeen ciidamadda.
GAROWE, Puntland – Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamadda iyo Dambiyadda Culus ee gobolada Nugaal iyo Sool ee Puntland ayaa Axada maanta ah waxay xukuntay saddex ku eedeysanaa in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
Ismaaciil Cabdullaahi Ibraahim [Cabdikaafi], 18-jir, iyo Xasan Uulow Ibraahim [Camaar], 19-jir, ayaa lagu wada xukumay xabsi daa'in.
Maxamed Ibraahim Isxaaq [Osaama], 16-jir, ayaa loo gacan-geliyey Wasaarada Cadaaladda iyo Dhaqan-celinta "maadaama uusan gaarin da'diida lagu xukumi lahaa," sidda sheegay gudoomiyaha maxkamadda.
Cabdiraxmaan Ciise Xuseen, gudoomiyaha Maxkamadda oo xukunka ku dhawaaqay, ayaa shaaca ka dhigay in saddexdooda ay qirteen dambiga lagu soo oogay iyo in ay xubin ka ahaayeen kooxda argagixisada ah.
Dhame Saciid Xirsi Ibraahim, xeer-ilaaliyaha Maxkamada oo fadhi goobjoog ka ahaa, ayaa wuxuu doonayey in saddexdooda garka loo wada geliyey xukun dil toogasho ah "maadaama iyagoo dagaalamaya la qabtay".
Sidda uu wariyey telefishinka ku hadla afka dowladda Puntland, saddexdooda ayaa degaanka Bali-qadar ee gobolka Bari waxaa laga soo qabtay 21-ka bishii August ka gedaal markii ay weerareen ciidamadda amniga.
Sidda ku xusan warbixinta, xilli lagu soo tababaray koonfurta Soomaaliya, waxaa loosoo safriyey si ay ula dagaalamaan horumarka Puntland.
Bishii hore ee September, 26-keeda ayay ahayd markii Maxkamadda Ciidamada gobolka Bari ay xukuntay shan ku eedeysanaa argagixisanimo.
Al-Shabaab iyo Daacish ayaa si dhuumaaleysi ah uga howlgala Buuraleyda Golis ee gobolka Bari. Ciidamada difaaca Puntland iyo saaxiibadooda caalamiga ah ayaa waxay iska kaashadaan sidii loosoo afjari lahaa joogitaankoodda.
Sarkaal isagoo weesaysanaya lagu dilay waqoyga magaalada Gaalkacyo
Puntland 11.04.2020. 01:30
Hay'addaha nabad-gelyadda ayaa tibaaxay in ay saxaafada lasoo wadaagi doonan macluumaadka kasoo baxa baaritaanka ay ku bilaabeen kiiska.
Taliye iyo saraakiil ka badbaaday qaraxii koonfurta Gaalkacyo
Soomaliya 21.12.2019. 21:39
Cadaalad loo dalbay shacab uu Mareykanka "ku laayey" Puntland
Puntland 26.10.2019. 18:01
Nin Al-Shabaab ah oo horey xabsi uga sii daayey Gaas oo dil lagu xukumay
Puntland 14.11.2018. 15:54
Saraakiil kasoo goostay Al-Shabaab oo lasoo bandhigay
Soomaliya 10.10.2019. 13:08
Shaqsiyaad Al-Shabaabnimo ku cabsi gelin jiray mas'uuliyiin oo la qabtay
Puntland 09.06.2020. 15:10
Puntland oo qabatay shaqsiyaad looga shakisan yahay Al-Shabaabnimo
Puntland 04.03.2020. 14:00
Qaraxii ka dhacay Garowe oo si xoogan loo cambaareeyay
Puntland 29.03.2020. 21:45
Ciidamada Soomaaliya oo ka hayaamay degaan ay dagaal ku qabsadeen 20.10.2020. 21:45
Agaasimaha hay'adda socdaalka Soomaaliya oo qarax ka badbaadey 20.10.2020. 20:55
Adeegga Internet-ka qeybo kamid ah Soomaaliya oo dib usoo noqday 20.10.2020. 20:47
Diblumaasiyiinta caalamka oo laba qodob hor-dhigay Fahad Yaasiin 20.10.2020. 19:00
Fekradaha u jaran-jeera Al-Shabaab oo dib uga curtay Muqdisho 20.10.2020. 14:45
Haweenay fulinta howlgal sirdoon u martay Soomaaliya oo la xiray 20.10.2020. 08:56